Soosaarayaasha taxanaha Resin - Shirkadaha Soo Saara Qufulka & Warshadaha Shiinaha
Dalool yar oo geed qarin kara
Magaca Badeecada Dalool yar oo geed leh oo leh geed qarsoodi ah 11 * 11 * 5cm Matin Resin Matel Model NS-21 Feature Qaabka weyn ee lagu dari karo meelaha la fuulo iyo meelaha lagu qariyo wax kastoo vivarium ama terrarium. Waa wax lagu qurxiyo qurxinta waxyaalaha aad taabanayso ee gurigaaga iyo ku darista meelo dhuumasho oo cusub ayaa waliba ku dari doonta muuqaal dabiici ah galka. Ka kooban resin oo aan lahayn sun iyo urta xun, kuleylka kama hortagga ah Horudhac bey'ada ilaalinta bey'adda sidii shey ceyriin ah, ka dib daaweynta heerkulka sare ee jeermiska, aan sunta lahayn iyo wax ...
Resin ku dabool qulqulka
Magaca Alaabtu resin ku dabool sagxadaynta Midabka 12.5 * 13 * 7cm Moodhida Alaabada Shayga NS-04 Ku muuji meel dhuumasho leh sagxad iyo meel loogu talagalay alaabadaada ku habboon iyadoo la adeegsanaayo sida ugu habboon, adkaysiga, iyo jiritaanka resin ma aha wasakhaysan oo way fududahay in la nadiifiyo Hordhac Kaydinta Ilaalinta Bey'adda sidii shey cayriin ah, ka dib daaweynta heerkulka jeermiska jeermiska badan, kuwa aan sunta ahayn iyo kuwa aan dhadhamin. Naqshadeynta-Bark-like, is-dhexgalka wanaagsan ee jawiga taranka, samee firfircoonaan dheeraad ah.
Resin Dhagaxa madow
Magaca Badeecada Resin dhagaxa madow ee qarsoon Nooca 14 * 13.5 * 6.5cm Qalabka Resin Model NS-03 Muujinta Dariiqad Wanaagsan oo loogu dari karo fuulitaanka iyo meelaha lagu qarin karo vivarium ama terrarium kasta. Waa wax lagu qurxiyo qurxinta waxyaalaha aad taabanayso ee gurigaaga iyo ku darista meelo dhuumasho oo cusub ayaa waliba ku dari doonta muuqaal dabiici ah galka. Ka kooban resin oo aan lahayn sun iyo urta xun, kuleylka kama hordhaca ah Horudhac bey'ada ilaalinta bey'adda sidii shey ceyriin ah, ka dib daaweynta heerkulka sare ee jeermiska, aan sunta lahayn iyo dhadhanka ...
Resin wareegga dhagaxa weyn
Magaca Alaabada 'Resin wareega dhagax weyn qarin' Nooc 15 * 14 * 9.5cm Qalabka Resin Qalabka NS-02 Feature Qaabka ugu wanaagsan ee lagu dari karo fuulitaanka iyo meelaha lagu qariyo wax kasta oo vivarium ama terrarium. Waa wax lagu qurxiyo qurxinta waxyaalaha aad taabanayso ee gurigaaga iyo ku darista meelo dhuumasho oo cusub ayaa waliba ku dari doonta muuqaal dabiici ah galka. Ka kooban resin oo aan lahayn sun iyo urta xun, kuleylka kama hordhaca ah Horudhac bey'ada ilaalinta bey'adda sidii shey cayriin ah, ka dib daaweynta heerkulka sare ee jeermiska, aan sunta lahayn iyo dhadhanka ...
Resin dhagaxa qarin kara oo furan
Magaca Alaabada Alaabada 'Resin dhagax' qarsoon oo furan oo furan Fahmitaanka midabka 26 * 23 * 13cm Waxyaabaha Resin Maaddada Model NS-01 Muuqaal Meel dabiici ah oo loogu talagalay waxyaabaha aad taabanayso Xakamaynta, xoogga, iyo jiritaanka resin Ma aha wax caaryada ah oo ay fududahay in la nadiifiyo Horudhaca Deegaanka ilaalinta resin sidii shey ceeriin ah, ka dib daaweynta heerkulka jeermiska jeermiska badan, kuwa aan sunta ahayn iyo kuwa aan dhadhamin. Naqshadeynta-Bark-like, is-dhexgalka qumman ee deegaanka taranta, samee firfircoonaan dheeraad ah.
Nooc Muuqaal Resin Turtle moodal Galapacos Cahminta Midabka 18.5 * 8.5 * 10cm Qaabka Resin Model A8 Muuqaal Resini tortoise, 8 nooc, mid macquul ah oo qurxan Qaab kasta ayaa gacanta lagu rinjiyeeyay dephenylpolyester aan-sumayn sunta, ka-hortagga soo-muuqashada, biyuh-celinta, ka hortagga hoos u dhaca . Hordhac Laba nooc oo taxane ah oo ah miisanka 'turtle model', jilitaanka moodada, sawir quruxsan. Waxaa loo adeegsan karaa sida qurxinta qafiska afgembi ama beddelidda kunool nool ee sawir qaadista iyo muujinta. Waxay leedahay 5 commo ...
[Nuqul] Resin turtle model Galapacos
Moodhida Tartanka ee Angonoka L
Nooc Muuqaal Resin Turtle moodal Mod Ang Angka L Nooca Sheegashada 15 * 9.5 * 9cm Model Resin Model A7 Muuqaal Resini tortoise, 8 nooc, mid macquul ah oo qurxan Qaab kasta ayaa gacanta lagu rinjiyeeyay depenylpolyester aan-sumayn sunta, ka hortagga soo-muuqashada, biyuh-celinta biyaha, anti-difaac dhicitaan. Hordhac Laba nooc oo taxane ah oo ah miisanka 'turtle model', jilitaanka moodada, sawir quruxsan. Waxaa loo adeegsan karaa sida qurxinta qafiska afgembi ama beddelidda kunool nool ee sawir qaadista iyo muujinta. Waxay leedahay 5 caadi ah ...
[Nuqul] Resin turtle model Angonoka L
[Nuqul] Resin turtle model Sulcata M
Nooca Muuqaalka Magaca Quudinta Tartanka moodalka Sulcata M Nooca Midabka 13 * 7.5 * 7.5cm Qalabka Resin Model A6 Muuqaalka Resin tortoise moodada, 8 qaab, macquul ah oo qurux badan Moodeel kasta ayaa gacanta lagu rinjiyeeyay dephenylpolyester aan-sumayn sunta, ka hortagga soo-muuqashada, biyuh-celinta biyaha, anti-difaac -dhis. Hordhac Laba nooc oo taxane ah oo ah miisanka 'turtle model', jilitaanka moodada, sawir quruxsan. Waxaa loo adeegsan karaa sida qurxinta qafiska afgembi ama beddelidda kunool nool ee sawir qaadista iyo muujinta. Waxay leedahay 5 caadi ah ...
Tartanka turtle moodal Sulcata M
[Nuqul] Resin turtle model Hemann's
Nooc Tilmaameedka Taranka Taranka oo ah Hemann Tilmaanta Midabka 11 * 7.5 * 7cm Model Resin Model A5 Feature Resin tortoise moodada, 8 qaab, macquul ah oo qurux badan Moodeel kasta wuxuu gacanta ku sawiran yahay midab jilicsan oo aan lahayn sun, ka hortagga soo-muuqashada, biyuh-difaac, ka hortagga hoos u dhaca . Hordhac Laba nooc oo taxane ah oo ah miisanka 'turtle model', jilitaanka moodada, sawir quruxsan. Waxaa loo adeegsan karaa sida qurxinta qafiska afgembi ama beddelidda kunool nool ee sawir qaadista iyo muujinta. Waxay leedahay 5 com ...